Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 30/01/2021)
2018 dia efa any tapitra, izay afaka ihany no midika fa efa akaiky ny Noely! Ny olona mbola tsy nahazo vonona ho azy, afa-tsy ny mpandeha, fa ora tokony drafitra lavitra. Raha tadiavinao ny tanàna tsara ny mandany Noely in, dia efa nahazo anao voasarona.
Ity lahatsoratra ity dia hanome anao an-tsipiriany Lisitry ny tanàna tsara indrindra mandany Noely in. Inona koa, Ho isika hiresaka momba ny zavatra mahafinaritra rehetra azonao atao any, fa ny zava-dehibe kokoa, ny fomba hahazoana any amin'ireo tanàna ireo lamasinina.
Azonao atao ny mitsidika Amsterdam lamasinina avy saika na aiza na aiza any Eoropa. Ny foibe fiantsonan'ny mifandray amin'ny Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, sy ny maro hafa. Misy tsipika tsy tapaka ny ankamaroan'izy ireo sy ny maro hafa ny tanàna any Holandy. Koa raha tianao amin'ny fiarandalamby Eoropeanina ianao dia afaka mahazo ny tsara indrindra maro ny tanàn-dehibe mandany Noely in 1 diany.
Budapest, ny renivohitr'i Hongria sy ny tanàna tsara tarehy indrindra ao aminy, no iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba handany Noely in for antony maro. Eo amin'ny renirano Danube no misy ny tanàna ary manolotra sasany mahatalanjona mitaingina sambo. Azonao jerena saika rehetra ny trano manan-tantara hatramin'ny Ony.
koa, ianao tsy maintsy mahita ny manaitra Buda Castle ary ny Parlemanta Building. Fa ny zavatra azonao atao ao amin'ny ririnina, misy maro. Avy mitaingina ny streetcars ho Skating amin'ny Budapest Park ranomandry rink, misy maro foana ny zavatra ho atao eto. koa, aza adino ny mitsidika ny Noely tsena amin'ny Vorosmarty Square sy ny Noely ara-drariny tao amin'ny Basilica.
Ny iray amin'ireo antony naka Genève for Best Cities mandany Noely bilaogy dia hoe Food tia koa dia tokony hifaly toy ny tanàna talohan'ny-Noely tsena manolotra sakafo avy amin'izao tontolo izao. Inona koa, dia afaka mandeha miantsena Mandeha amin'ny Street, ary avy eo dia hitsidika ny sasany amin'ireo mari-toerana manan-danja indrindra. Anisan'izany ny Palace Firenena Mikambana, St Pierre Cathedral, Water Jet, sy ny maro hafa.